नेताले ठेक्का लिएको पुल ७ बर्षसम्ममा पनि बनेन, १२ वटा पिल्लर मात्रै ठडियो « News24 : Premium News Channel
१७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार
नेताले ठेक्का लिएको पुल ७ बर्षसम्ममा पनि बनेन, १२ वटा पिल्लर मात्रै ठडियो
मकवनपुर । पुर्वाधार निमार्णको ठेक्का राजनीति गर्ने नेताले पाए भने के होला ? उदाहरणको लागि मकवानपुरको बागमती गाँउपालिका ४ र सिन्धुलीको हरीहरपुर ४ जोड्ने बागमती खोला माथिको पुल बनाउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य जयराम लामिछानेले लिएका थिए जुन ७ बर्ष देखि अलपत्र छ ।
२१ करोडको लागतमा ५ बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी लामिछानेको स्वछन्द निर्माण कम्पनीले लिएको थियो । अहिलेसम्म पुलका १२ वटा पिल्लर मात्रै खोलामा उभिएका छन् । सर्वसाधारण भने डुउबको भरमा खोला वारपार गर्न बाध्य छन् ।
मोटरेवल पुल बन्ला र जनजिवन सहज होला भन्ने आशामा बसेका स्थानीयहरु निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यालय प्रति रुष्ट छन् ।
स्वछन्द निर्माण कम्पनीले समेत अर्का ठेकेदार शम्भुराज गिरी र गौरव पुडासैनीलाई जिम्मा लगाएको रहेछ । सडक आयोजनबाट ६ करोड भुक्तानी भैसकेको पुल अलपत्र अवस्थामा छ । मुख्य ठेकेदार जयराम लामिछाने भने जगमा समस्या आएकाले काम रोकिएको बताउँछन् ।
अर्का पेटी ठेकेदार भने सरकारी कर्मचारीको कारण बजेट ढिला स्वकृत हुँदा काम ढिला भएको दाबी गर्छन् । तर सडक योजनका साइट इन्र्चाज इन्जिनियर कविस तण्डुकार भने कामको प्रगती र गुणस्तर सम्झौता बमोजिम नभएकाले भुक्तानी रोकिएको बताउँछन् । सराकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको धरान–चतरा–सिन्धुली–हेटौंडा सडक खण्डको यो पुलको अवस्था त यस्तो छ भने अन्य आयोजनको अवस्था के होला ?
काठमाडौं । कोटेश्वरबाट पठाओ राइडरलाई धापाखेल पुर्‍याइ अपहरण लुटपाट गर्ने दुई जना पक्राउ परेका छन्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको
ललितपुरको सुनाकोठीस्थित बालकुमारी मन्दिरको लिच्छवीकालीन मूर्ति चोरी
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका–२७ को सुनाकोठीस्थित बालकुमारी मन्दिरको लिच्छवीकालीन मूर्ति चोरी भएको छ । स्थानीयवासीबाट
काठमाडौं उपत्यकामा जोर–बिजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा कडाई
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कडाई गरिएको छ । उपत्यकाका
मुलुकभर थप ६४६२ जनामा कोरोना पुष्टि, ४ संक्रमितको मृत्यु
नेपालमा थप २८ जनामा ओमिक्रोन पुष्टि